Andro: 31 Oktobra 2019
Ny lalamby voalohany, izay maharitra, izay nanokatra tamin'ny 1888 teo anelanelan'i Tehran sy ny tempolin'i Shah-Abdol-Azim any Rey. Ny tsipika 800km, naorina teo amin'ny metatra 9mm, dia natao indrindra ho an'ny mpivahiny ary na dia sampana maromaro aza no nampiana tao aoriana. farany [More ...]
Fanamboarana rindrina fanamafisana vita amin'ny rindrina vita fanamafisana vita amin'ny rindrina sy fanadiovana eo anelanelan'ny 355 + 055 - 355 + 300 Km. Dirate déritoire régionalité régionalité (TCDD) 2 / 2019 [More ...]
Manome ny fifandraisan'i İzmir amin'i Aliağa sy Portandarlı Port miaraka amin'ny lalambe mahazatra, ny fifamoivoizana mavesatra avaratra-atsimo atolotry ny làlan'ny tanàna efa misy dia afindra amin'ny tamba-jotra misy ny làlamby. [More ...]
Gaziantep Biraon'ny Governora amin'ny fandrindrana, Gaziantep Metropolitan Monisipaly Tanora sy Fanatanjahan-tena amin'ny departemantan'i Services Fiadidiana an'i Torkia Roman Catholic Sports Federasiona amin'ny fiaraha-miasa xnumx'ünc fotoana voalohany tao Torkia nokarakarain'ny World Marenina Cycling Championships faharoa [More ...]
Ny asa fanamboarana sy fanamboarana rafitra elektrizika eo anelanelan'ny Eskişehir (Voahilika) - Kütahya - Tavşanlı - Tunçbilek (incl.): Railway State Railway 7. Ny talen'ny faritra (TCDD) 2019 / 481510 GCC dia nanisa Eskişehir [More ...]
Tsy nanambara ny valin'ny fitiliana am-bava ny TCDD ho an'ny fandraisana mpiasa mpiasa mandritra ny telo volana. Ny hamafin'ny minisitra Turhan dia notanisaina noho ny antony tsy hanazavana ny valin'ny fitsapana. Ny mpiasan'ny TCDD miandry ny valin'ny fanadinana ho an'ny fidirana mpiasa [More ...]
Ny garan-dalamby Derbent manan-tantara dia mikasa ny hisokatra amin'ny faran'ny Oktobra, fa tamin'ity indray mitoraka ity dia nijanona hatramin'ny desambra hoy ny fasan'i Oğuzhan Aktaş avy ao amin'ny Kocaeli Barış Newspaper; Seranan-dalamby Derbent ara-tantara any Kartepe, lalamby fanjakana [More ...]
TCDD 7. Toerana fitaterana foibem-paritra, Museum, fitsangatsanganana fiaran-dalamby ary zotra Muselles amin'ny dia fiaran-dalamby fohy avy amin'ny talen'ny Sekoly ao Afyonkarahisar mangataka fitsangatsanganana ao anatin'ny sehatry ny protocol nosoniavina niaraka tamin'ny Direktoran'ny fanabeazam-pirenena. [More ...]
Afo tao anaty lamasinina mpandeha tao Pakistan ..! Maty i 65; Sarety telo no nikatona ny gara mpandeha avy tao Lahore ka hatrany Karachi, Pakistan. Farafaharatsiny olona 65 no namoy ny ainy tao anaty afo. Minisitry ny lalamby Pakistan [More ...]
Ny filohan'ny Terme Chamber of Commerce and Industry Ahmet Ekmekçi dia nilaza fa tena zava-dehibe ny tetikasa Samsun Sarp Railway ary nilaza, adına Izahay dia manohana ity tetik'asa ity hatramin'ny faran'ny fampandrosoana ny faritra adına ho amin'ny fampandrosoana ny toekarena amin'ny Ranomasina Mainty. [More ...]
Bursa Metro Timetable, Vidiny tapakila ary sarintany misy; Misy toeram-piantsonan'ny 7 any Bursaray, ao anatin'izany ny 38 any ambanin'ny tany. Ny halavan'ny lavan'ny làlan'ny lalana roa dia misy ny 39km ary mahaleo tena tanteraka ny rafitry ny làlana. Orinasa BursaRay [More ...]
Mandeha any Kandira ny birao finday Caravan
Kocaeli Metropolitan Munisipalin'ny departemantan'ny Fitaterana sy fitantanana fifamoivoizana, Unit'ny fitsangatsanganana mba hahafahana mamaly ny fitomboan'ny fangatahan'ny Mobile Office Caravan mankany Kandira. Mobile Office Caravan, 5 dia any Kandira ho an'ny olom-pirenena mandritra ny andro [More ...]
Vita amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul dia hamita ny ampahefatry ny 2020. H. Kadri Samsunlu, filoha sy Lehiben'ny Mpanatanteraka ao amin'ny seranam-piaramanidina IGA, dia nanao io fanambarana io. Arahin'i Istanbulites akaiky [More ...]
Ny solontenan'ny vondron-tafika isam-paritry ny Tafika teknikan'ny tafika Musa Kiranli, "ny Ranomasina Mainty dia nofinofin'i Ataturk ary ny tetik'asa repoblika tsy mbola vita," hoy izy. Solontenan'ny Tafiky ny teknisiana, Musa Kıranlı, miaraka amin'ny Samsun Sarp Railway Project [More ...]